Nhau - Mwaka wechirimwa hanyanisi unobuda!
Chimwe chezvikamu zvinopa mubayiro zvebasa rangu semuteereri akanaka ndezvinhu zvidiki zvamunogovana neni mose, kungave chikafu chakagadzirwa, nhau pamusoro penyika dzenyu, pikicha yezvirimwa zvamunorima munyika, kana zvakanakisa zvese, tichiona zvirimwa zvatakakohwa pamusoro pemakore zvakangoerekana zvamera kubva kumbeu mukati mevhu kusvika pakutambanudza nhovo. [wedzera chirimwa pic pano pakati] Mweya unoshamisa wakagovana pikicha kumusoro kumusoro neni kupera kwevhiki. Inopfupisa zvese zvandanga ndichiedza kutaura pano kwemakore gumi apfuura. Ini ndinogona kutonhodzwa-kureba-nemhepo munzvimbo ino dzimwe nguva. Ini handina kana chinhu chekuwedzera kune iyo yakanaka noti.
Maonikisi edu anorimwa mumwaka wematsutso pagore, kunze kwekunge hanyanisi diki yakadzika midzi inokura chete munzvimbo inotonhora kwazvo kuchamhembe. Sezvo isu tese tichiziva, hanyanisi mwaka unogara uchiita kunge wakapfupika. Chokwadi chaicho ndechekuti tinogara munzvimbo inopisa, yakanyorova, ine hunyoro. Kupisa, kunyorova, uye kunyorova ndiyo mamiriro akakwana ezvirimwa chirwere spores kubereka. Isu tinoita zvese zvatinogona kuti tive nechokwadi chekuti tinotanga neine hutano hwakanaka zvirimwa, uye nekupa ivhu zvese izvo chirimwa chingangoda. Ipfupi yekuenda kune inonaya mamiriro ekunze, kana kushandisa yakawanda yakashata fungicides, isu kazhinji tinowana mashoma mavhiki mashoma nguva yekukohwa. Tine mavhiki mashoma eanisi gore rino; paavhareji chaipo, uye ndinofunga kwaive kwakanaka chaizvo kutakura pane chaive chakanakisa nguva yematsutso.
Zvipo zvaNovember zvinogona kuwana mwenje mudiki sezvo kuzhinji kwekutarisa kwedu kuri kutarisana nekudonha uye mwaka wechando zvirimwa zvakasimbiswa, saka tese tine zvinhu zvakanaka zvekudya kwehafu yekupedzisira yegore mumapurazi.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, ungade here kutarisa kune webhusaiti yedu ichangovambwa? Iyo AGR Onion Farm inoda chaizvo kunzwa kubva kwauri! Dzvanya pane iyi link www.primeagr.com uye utaure izwi rako kunze! Kutenda senguva dzose kune rako bhizinesi, uye uve nevhiki rakanaka!
Post nguva: Nov-25-2020